आज श्रावण ६ गते बुधबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ? - kageshworikhabar.com
आज श्रावण ६ गते बुधबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ?
आज मिति वि. सं. २०७८ साल श्रावण ६ गते। बुधबार। तपाईंको आजको राशिफल
निकै सावधान रहन पर्ने दिन रहेको छ। सरकारी बिरोधि कार्यबाट टाढा रहनु होला । खान- पानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ । गरेका काम समयमा सम्पन्न नहुन सक्छ । व्यवसायमा बिशेष ध्यान दिनुहोला। आफूभन्दा ठुला अधिकारी आफ्नो पक्षमा हुनेछन्। सन्तानसँग वादविवाद हुन सक्छ ।
मनपरेका साथि तथा आफन्तसँग रमाइलो यात्रा हुनुको साथै मनपर्ने खान प्राप्त हुनेछ । नयाँ वस्त्र प्राप्त हुनेछ । मध्यान्न पछि स्वास्थ्यको बिशेष ध्यान दिनुहोला । खर्च बढ्न सक्छ । लामो समय देखि छुटेका मित्र भेट हुनसक्छ।
पारिवारिक वातावरण रमाइलो हुनेछ। काममा जोस जागर बढ्नेछ। मन खुशी हुनेछ । रोकिएका कार्य पुरा हुनाले खुशी बढ्ने छ । व्यवसाहिक कार्यमा वातावरण अनकुल हुनेछ। आर्थिक लाभ हुनेछ। साथि भाइसँग रमाइलो स्थलको भ्रमण हुनेछ। मान सम्मान बढ्ने छ ।
आर्थिक योजना बनाउन राम्रो समय रहेको छ। ध्यान पुर्वक गरेका कार्य सम्पन्न हुनेछन्। वादविवाद बढ्न सक्छ। बिद्यार्थीहरुको लागि समय अनकुल हुनेछ। परिवारमा शन्तिको वातावरण हुनेछ। शारीरिक तथा मानशिक रुपमा स्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ । अधुरा कार्य पुरा हुनछन् । व्यवसायमा सहकर्मीको सहयोग प्राप्त हुनेछ।
शारीरिक तथा मानशिक रुपमा स्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ। आमाको स्वास्थ्यको चिन्ता बढ्ने छ । आर्थिक हानि हुनसक्छ । काम अनुसारको सफलता प्राप्त हुनेछ । विद्यार्थीहरूले काममा सफलता प्राप्त गर्नेछन्। नयाँ कार्यको थालनी नगर्नु होला।
आर्थिक रुपमा सवलता हुनेछ। नयाँ कार्यको थालनीको लागि उचित समय रहेको छ। पुराना साथि भेट हुनेछन । बिरोधिलाइ पराजित गरिने छ । दिनको मध्यान्न पछि स्तिथिमा परिवर्तन हुनेछ। आमाको स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छ । अचल सम्पतिको लेन देन नगर्नु होला।
स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। मानसिक तनाव बढ्न सक्छ । परिवारका सदस्यसँग सचेत भएर कुरा गर्नु होला अन्यथा विवाद हुनसक्छ । धार्मिक कार्यमा खर्च हुनेछ। आर्थिक लाभ हुनेछ । भाग्य वृद्धि हुनेछ। कममा सफलता मिल्नेछ । रमाइलो यात्रा हुनसक्छ।
शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थ्य स्थिर हुनेछ । परिवारमा खुशी छाउने छ । साथी तथा आफन्त भेट हुनसक्छन्। दिनको मध्यान्न पछि मनमा नकारात्मक बिचार आउन सक्छ। तपाईंको बोलिबाट परिवारका सदस्यको मन दुख्न सक्छ । मन खिन्न हुन सक्छ । धार्मिक कार्यमा खर्च बढ्न सक्छ।
रिसलाइ नियन्त्रण गर्नुहोला। परिवारक सदस्यसँग खट-पट हुन सक्छ । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ। दिनको मध्यान्न पछि गरेका कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ। परिवारमा शान्तिको वातावरण हुनेछ। शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ।
चर्चा बढ्ने छ । व्यवसाय तथा सामाजिक रुपमा लाभ हुनेछ । स्वास्थ्यको बिशेष ध्यान दिनुहोला। सवारी साधनको प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान दिनुहोला । मानसिक रुपमा अस्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ । मनोरन्जनमा धन खर्च हुन सक्छ ।
मान प्रतिष्ठा बढ्ने छ। धन लाभ हुनेछ । गरेका कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ। पद बढ्न सक्छ। साथिसँग घुम्ने योजना बन्न सक्छ। व्यवसामा लाभ हुनेछ। आय स्रोत बढ्ने छ।
व्यापारीको लागि समय उपयुक्त छैन। चर्चा बढ्नु साथै विवादमा पर्न सकिन्छ। बसाइ सराइ हुनसक्छ। अधुरा कार्य पुरा हुनेछ। व्यापारको सिलसिलामा लामो यात्रा हुन सक्छ। सन्तान शुख मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ ।
Previous articleभोलि श्रावण ६ गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
Next articleआज बकर इद पर्व : देशभरका मस्जिदमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै